Iiapps ze-oculus zityhola ubushushu, idreyini yebhetri kwii-smartphones ze-galaxy ezisandula ukuhlaziywa
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Iiapps zeOculus zityhola ubushushu, idreyini yebhetri kwii-smartphones zeGlass ezisandula ukuhlaziywa
Iiapps zeOculus zityhola ubushushu, idreyini yebhetri kwii-smartphones zeGlass ezisandula ukuhlaziywa
Kubonakala ngathi abanini bomphetho we-Samsung Galaxy S6, i-Galaxy S7, kunye nomda we-Galaxy S7 sele bekhalaza malunga nokutsala ibhetri kunye neengxaki zobushushu okokoko uhlaziyo lwamva nje luye lwatyhalwa kwiifowuni zabo. Umsebenzisi weReddit utyhola ukuba ifowuni yabo ikhutshiwe yaya kuthi ga kwi-86% kwimizuzu nje eli-15 yokusetyenziswa okuncinci, isikrini siba shushu ngokungathandekiyo. Iyure yokungasetyenziswa konke konke kamva, isixhobo simi kwi-57% yebhetri. Akufuneki ukuba sithi, loo nto kukuwohloka okukhawulezileyo kobomi bebhetri okungafanele kuthathwe lula.
Omnye umsebenzisi weReddit ucebise ukuba imiba iqale ukubonakala emva kohlaziyo kwii-Gear VR zokusebenza ngu-Oculus. Kuthiwa ukukhupha ii -apps ngo-Oculus kusombulule iingxaki. Abanye bathathe ku-Twitter ukuya kuxela ingxaki ngqo kwinkampani yokwenyani, ebonelela ngesoftware kunye nabaqhubi be-Samsung kunye neeapos zeGear VR yamava.
Yiyo loo nto, ukuba ufumana ibhetri yokuphuma kunye neengxaki zobushushu ukusukela uhlaziyo lwamva nje kwisixhobo sakho seSamsung, uyakhuthazwa ukuba uzame ukukhipha naziphi na iiapps eziyinyani nguOculus kude kube yingxaki ukuba isonjululwe. Kodwa i-Samsung okanye i-Oculus kusafuneka ikhuphe impendulo esemthethweni ngalo mbandela, ke asinakho ukubonelela ngesiqinisekiso sokuba ukususa ii-Oculus zokusebenza kuya kubonelela ngesisombululo. Kodwa kuba azikho ezinye iingcebiso okwangoku, unokufuna ukuzama le.
nge Ixesha leTech
ukukhulisa iintengiso ezimnyama zangoLwesihlanu nge2018
Imidlalo ye-android enemizobo emihle
IfotoMath isebenzisa ifowuni kunye nekhamera ukusombulula iingxaki zezibalo
Eyona nto ithengwayo kunye neAmazon zineyona Samsung Galaxy Watch isebenzayo kwintengiso ngexabiso elingenakuphikiswa
Ngaba i-smartphone inokulinganisa ubushushu obufana nethemometha?
Umda we-Samsung Galaxy S7 vs Apple iPhone 6s Plus
Isivumelwano: Ukuthenga okungcono kunika izaphulelo ezibalulekileyo kwiimodeli ezahlukeneyo ze-Apple Watch 2
Eyona T-Mobile ihlawulwa kwangaphambili kunye nezicwangciso zokubhatalwa kwangaphambili
I-Sprint inokulungisa izikrini ezaphukileyo kwiifowuni ezininzi eziphezulu ze-Samsung ngexabiso eliphantsi